नेपालसँगको वार्ताबाटै सीमा समस्या सल्ट्याइन्छः भारतीय रक्षामन्त्री - Namaste Hetauda
घर राजनीति नेपालसँगको वार्ताबाटै सीमा समस्या सल्ट्याइन्छः भारतीय रक्षामन्त्री
नेपालसँगको वार्ताबाटै सीमा समस्या सल्ट्याइन्छः भारतीय रक्षामन्त्री
२०७७, १ असार सोमबार १६:४१
भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सोमबार उत्तराखण्डमा भारतीय जनता पार्टीको एक कार्यक्रमलाई भर्चअुल सम्बोधन गर्दै नेपालसँगको सम्बन्ध विशेष रहेको बताएका छन् । उनले लिपुलेकमा सडक निर्माण र नेपालले नक्सा जारी गरेपछि निम्तिएको परिस्थितीलाई वार्ताद्वारा सल्ट्याइने बताए । ‘नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध निकै गहिरो छ । दुबै देशबीचको सम्बन्ध सामान्य होइन र हामी रोटी–बेटीको सम्बन्धमा बाँधिएको छौं । दुनियाँको कुनै पनि शक्तिले यसलाई तोड्न सक्दैन,’ सिंहले भने । उनले भारतको रक्षाका लागि गोर्खा सैनिकले अदम्य साहस देखाएको भन्दै त्यसको तारिफ पनि गरे ।
उनले नेपाल र भारतबीच भौगोलिक र सामाजिक मात्रै नभएर आध्यात्मिक सम्बन्ध समेत रहेको औ‌ंल्याए । ‘नेपालसँग हाम्रो भौगोलिक, ऐतिहासिक र सामाजिक सम्बन्ध मात्रै होइन आध्यात्मिक सम्बन्ध पनि छ । कसरी हामी पशुपतिनाथलाई बिर्सन सक्छौं ? कसरी बाबा अमरनाथ, सोमना र काशीबाट नेपाल अलग हुनसक्छ ? यो सम्बन्ध यस विश्वको होइन पुरै फरक विश्वको हो,’ उनले भने ।
८ मेइमा भारतका रक्षामन्त्री सिंहले नै भिडियो कन्फ्रेसिङमार्फत लिपुलेक सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपाल र भारतबीच विवाद सुरु भएको थियो र त्यसको १० दिनपछि सरकारले जारी गरेको नक्सालाई गत शनिबार प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । उनले भारतको रक्षाका लागि गोर्खा सैनिकले अदम्य साहस देखाएको भन्दै त्यसको तारिफ पनि गरे । उनले नेपाल र भारतबीच भौगोलिक र सामाजिक मात्रै नभएर आध्यात्मिक सम्बन्ध समेत रहेको औ‌ंल्याए । ‘नेपालसँग हाम्रो भौगोलिक, ऐतिहासिक र सामाजिक सम्बन्ध मात्रै होइन आध्यात्मिक सम्बन्ध पनि छ । कसरी हामी पशुपतिनाथलाई बिर्सन सक्छौं ? कसरी बाबा अमरनाथ, सोमना र काशीबाट नेपाल अलग हुनसक्छ ? यो सम्बन्ध यस विश्वको होइन पुरै फरक विश्वको हो,’ उनले भने ।
८ मेइमा भारतका रक्षामन्त्री सिंहले नै भिडियो कन्फ्रेसिङमार्फत लिपुलेक सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपाल र भारतबीच विवाद सुरु भएको थियो र त्यसको १० दिनपछि सरकारले जारी गरेको नक्सालाई गत शनिबार प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । नेपाली पक्षले लिम्पियाधुरासहितका भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेसँगै भूभाग फिर्ता गर्नका लागि भारतसँग वार्ता गर्न तयारी गरेको छ । तर, नेपालले पारित गरेको नक्साबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने आपत्ति जनाएको थियो । नेपालले जारी गरेको नक्सा अस्विकार्य हुने र यसले वार्ताको माहोल बिग्रिएको भन्दै भारतले विज्ञप्ति निकालेको थियो । नेपाली पक्षले लिम्पियाधुरासहितका भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेसँगै भूभाग फिर्ता गर्नका लागि भारतसँग वार्ता गर्न तयारी गरेको छ । तर, नेपालले पारित गरेको नक्साबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने आपत्ति जनाएको थियो । नेपालले जारी गरेको नक्सा अस्विकार्य हुने र यसले वार्ताको माहोल बिग्रिएको भन्दै भारतले विज्ञप्ति निकालेको थियो ।
बालुवाटारमा ओली र प्रचण्डबीचको छलफल विना निष्कर्ष टुंगियो
सामसुङ ‘एस२० अल्ट्रा’ नेपाली बजारमा आउँदै
१०८ जना कोरोना संक्रमित थपिए
मकवानपुरमा आजै दुईजना पुग्यो कारोना संक्रमित